प्रेमबिबाह गरेर ल्याएकि श्रीमती नै बनिन आमाको का’ल, छोरा रु’दै मिडियामा (भिडियो हेर्नुस)
पछिल्लो समय हाम्रो देश नेपालमा ह”त्या”हिं”सा जस्ता ज”घ”न्य अ”प”रा”धका घटनाहरुले चरम सिमा पार गरिरहेका छन । द”र्द”ना”क एवम ड”र”ला”ग्दा ह”त्याका घटना पनि पछिल्लो समय सामान्य बिषय बन्दै गएका छ्न । अझ पछिल्लो समय आफ्नो हाडनाताभित्र नै ह”त्याका घटना बढ्दै गएका छ्न । आखिर यस्ता घटना बढ्नुले के को संकेत गर्दैछ त ? के हाम्रो देशको कानुन नै फि”त”लो भएर हो त ? केही दिनअगाडि दाङमा आफ्नै बुहारीले छिमेकी साथिको सहयोगमा आफ्नै बुहारीलाई मारेको घटना अझै ताजै बिषय रहेको छ ।
केही दिन अगाडिको मात्र कुरा हो दाङ जिल्लाको घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १९ खानिगाँउमा एकदमै ड”र”ला”ग्दो घटना घटेको थियो । ५५ बर्षिय इन्द्रकुमारी घर्ति नाम गरेकी सासूलाई आफ्नै बुहारी अर्कि एक छिमेकी महिलाको सहयोगमा छिमेकमा न्वरान भएको मौका छो”पे”र एकदमै बी”भ”त्स तरिकाले नि”र्म”म”ता”पु”र्व”क ह”त्या गरेकाथिए । ह”त्या भएपछी उनको ला”छ भने घरनजिकै एउटा खोल्सामा फा”लि”ए”को अबस्थामा भेटिएको थियो ।
घरमा केही सामान्य बिबाद भैसकेपछि दुई बुहारीहरु मिलेर सासूलाई अ”चे”त अबस्थामा पुग्ने गरि काठको मु”ढा”ले हा”ने”र र”ग”ता”म्मे अबस्थामा पुर्‍याएपछि उनको श”ब भने घरनजिकैको खो”ल्सा”मा हु”त्ता”इ”दि”ए”का थिए । खो”ल्सा”मा फा”ले”र पनि उनिहरुलाई शान्ती मिलेन, अझै सासू जिउँदै छ्न कि भनेर उनिहरुले त्यहीँ गएर ढु”ङ्गाले अनुहार नै कि”च्चि”ने गरि हा”ने”का रहेछ्न । २३ बर्षिय बुहारी बसन्ती घर्ती र २२ बर्षिय बुहारी दुर्गा घर्ती मिलेर आफ्नै सासूको नि”र्म”म”ता”पु”र्ब”क ह”त्या गरेको घटनाले सबैको सा”तो लिएको थियो ।
छिमेकमा न्वरान भइरहदा रातको समयमा मौका छो”पे”र यता बुहारीहरुले भने आफ्नै सासूलाई पहिले काठको मु”ढा”ले हा”ने”र र पछि ढु”ङ्गाले हा”ने”र मा”रे”र खोल्सामा फ्या”लि”दि”ए”का कुरा बाहिरीएको थियो । काठको मु”ढाले टा”उ”को छि”या”छि”या हुनेगरी हानेर ह”त्या गरेको र पछि ढोका थु”ने”र कोठाभित्र लागेको र”ग”त”माथी लि”प”पो”त गरेको एक स्थानीय महिलाले बताएकि थिइन । र”ग”ता”म्मे अबस्थामा लाछ घो”प्टि”ए”को अबस्थामा भेटिएको थियो ।
न्वरानमा नाँचगानको साथमा न”शा”पा”नी पनि खाएको र त्यहीँकारण झ”ग”डा”झ”ग”डामै यो घटना घटेको हुनसक्ने एक स्थानीय महिलाले बताएकी थिइन । कान्छी बुहारीले पहिले ह”त्या गरेको र श”ब उठाउन नसकेपछी छिमेकमा रहेको माईला बाबुको बुहारीलाई बोलाएको र दुईजना मिलेर श”ब खो”ल्सा”मा लगेर फा”लि”दि”ए”को उनले बताईन । मु”ङ्”ग्रो नै र”ग”तै”र”ग”त भएको स्थानियले बताएका छ्न । मृ”त”क”लाई सानिमा बताउने एक पुरुषले भने खोल्साबाट हु”त्त्या”इ”दि”ए”र ल”डे”जस्तै बनाउन खोजिएको बताएका छ्न ।
आफ्नी आमाको स्याहारसुसारको लागि घरमा श्रीमतीलाई राखेर कमाउन गएका छोराले जब श्रीमती भ”नौ”दि”ले आफ्नी आमालाई मा”रे”को सुन्दा छाँगा”बाट ख”से”झै भयो । आफू काम गरिरहेको अबस्थामा आमा खोल्सामा मृ”त भेटिएको भन्ने खबरले आफुलाई अ”चे”त बनाएको छोरा बताउँछ्न । घरको कान्छा छोरा उनले आमा एक्लि भएपछि धुमधामका साथ प्रेम बिबाह गरेका थिए उनले तर आज उनै श्रीमती उनको आमाको का”ल बनेकीछिन । आफ्नो बुढेसकालकि सहारा सोचेर बुहारी भित्रीदा खुसिको सिमा थिएन आमाको तर आज उनै बुहारीले आमाको खुसि एकपलमा त’ह’स’न’ह’स गरिदिएकी छिन ।
बाँकी हेर्नुस तलको भिडियोम
२०७८ फाल्गुन ११, बुधबार प्रकाशित0Minutes 78 Views